ISundowns iqinisekise eyokuvuselelwa kwenkontileka yesethenjwa | News24
ISundowns iqinisekise eyokuvuselelwa kwenkontileka yesethenjwa
Cape Town – Umqeqeshi weMamelodi Sundowns, uPitso Mosimane, useqinisekise abalandeli beSundowns ngokuthi le kilabhu “angeke idembesele” ezindabeni ezithinta izinkontileka zabadlali.
Ngokwe-website yeqembu, uMosimane ufunge wagomela ukuthi le kilabhu izogcina abadlali bayo ababalulekile ngaphambi kokuba kuqale isizini entsha ngo-Agasti.
“Besilokhu sibhekene nezinkontileka okumele zivuselelwe,” kusho uMosimane.
“Abanye abadlali banezigaba [zokukhetha ukuvuselela] ezinkontilekeni zabo okusiza ikilabhu, futhi sesizisebenzisile [izigaba zokuvuselela] ezinkontilekeni zabadlali abafana noLeo Castro kanye noWayne Arendse futhi sizobagcinela unyaka ozayo.
“Sekube kuningi ukukhuluma kanye nokuqagula ngabadlali bethu. Sidinga ukuqinisekisa abalandeli bethu ukuthi asidembeseli ngezinkontileka. Sisebenza kanzima ukuziphothula.”
UMosimane uthi abaphathi beqembu sebemuqinisekisile ukuthi baphezu kwazo zonke izinkontileka ezingaphothuliwe, okubandakanya nenkontileka kaKhama Billiat, osekuvele kuxoxwa ngokuthi ivuselelwe yize noma kusasele izinyanga ezingu-18 ngaphambi kokuba iphele.
Khonamanjalo, uMosimane ukuqinisekisile ukuthi inkontileka yakaputeni weqembu, uHlompho Kekana, isivuseleliwe njengoba nesizini isiyela ngasekupheleni.
“Abantu kumele baqonde ukuthi izinkontileka ziyaxoxwa, futhi lolu akusilo uhlelo olulula. Sisanda kuphothula izingxoxo zokwelulwa kwenkontileka nokaputeni uHlompho Kekana, futhi inkontileka yakhe isivuseleliwe. Ukugcina ukaputeni wethu kubalulekile,” kuqhuba uMosimane.
“Wahola iqembu kuChampions League kanye neSuper Cup, kanjalo futhi nakule sizini. Kubalulekile ukumgcina kanye nabanye abadlali ababalulekile njengoba siqala ukuvikela iChampions League."